काठमाण्डौको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल, के थियो विवाद ? (भिडियो) - Nepali in Australia
May 28, 2021 autherLeaveaComment on काठमाण्डौको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल, के थियो विवाद ? (भिडियो)
काठमाण्डौको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल भएको छ । जसमा सुकुम्बासी माथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । प्रहरीको समुहसंग क्यामेरा लिएर पुगेका संचारकर्मीको पनि वि वा द भएको भिडियोमा देखिएको छ ।
सुकुम्बासी माथि भएको प्रहरी दमनको भिडियो संकलन गर्न पुगेकाहरुको क्यामेरा प्रहरीले खोसेको भन्दै वि वा द भएको हो । प्रहरीले सुकुम्बासी लाई बल प्रयोग गरेको पनि भिडियोमा देखिन्छ । महामारीका बीचमा सुकुम्बासीलाई घरवार विहिन बनाएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । सुरक्षाकर्मीको टोलीको नेतृत्व गर्दै पुगेका प्रहरी नायव
निरिक्षकले नै क्यामेरा तो ड फो ड गरेको भन्दै प्रहरीसंग वि वा द भएको भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । गोठाटारको बाग्मती नदि किनारमा झुपडी बनाएर बसेकाहरुलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अ ति क्र मण गरेको भन्दै प्रहरी टहरा भत्काउन पुगेको थियो । त्यही समयमा सुकुम्बासी र प्रहरीबीच पनि विवाद भएको हो । समाचार संकलन गर्न पुगेका
पत्रकामाथि पनि प्रहरीले क्यामेरा खोसे पछि विवाद थप चर्किएको थियो । संचारकर्मीले तपाई खैनी खानुभएको छ, ड्युटीमा खैनी खाने ? भन्दै विवााद गरेको पनि सुनिन्छ । पत्रकारलाई किन हात हाल्नुभयो ? क्यामेरा किन खोस्नुभयो ? तपाईको नाम भन्नुस् तपाई विरुद्ध प्रहरी प्रधानकार्यालयमा उजुरी हाल्छौं भन्दै विवाद गरेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
माहानायक राजेश हमालले सरकारलाई सुझाब दिएका छन । उनले अहिलेको बि”सम परि”स्थितीमा सरकारले मात्र कुर्चीको मोह गरेको तर जनतालाई नहेरेको बताएका छन ।
केहि दिन अगाडी ब्रिटेनको संसद भवनमा नेपालको अहिलेको अवस्थाको चर्चा भएको स्मरण गराउदै यस्तै बिश्वका अन्य देशले समेत नेपाल प्रती चासो राख्नुपर्ने बतए र त्यसको लागी हामी कति गम्भिर छौ त्यो महत्वपुर्ण हुने हमालले बताए ।
राजेशले सरकारलाई अब सबै कुरा छोडेर मात्र जनता बचाउन तर्फ लाग्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । यो परिस्थीतीमा छिमेकी देशहरु तथा मित्रराष्टहरु संग राम्रो सम्बन्घ राख्नुपर्छ उनले भने । यसको साथै अन्य धेरै कुरा महानायक राजेश हमालले भिडियो मार्फत सरकारलाई सुझाब दिएका छन । हेर्नुस भिडियो-
झन् खतरा को संकेत: वैज्ञानिक को निष्कर्ष ‘कोरोना खोपले वर्षौंसम्म भाइरससँग लड्न सक्छ’
खाने तेल र माछामासुको मूल्य सोच्नै नसकिने गरी ह्वात्तै बढ्यो !
४० किलो चामलकै कारण घर जग्गा लि’लाम